खुट्टा भए जुत्ता कति-कति, यस्तो जुत्ता भइदिए त हुन्थ्यो राम्रो अति – MySansar
खुट्टा भए जुत्ता कति-कति, यस्तो जुत्ता भइदिए त हुन्थ्यो राम्रो अति
Posted on August 14, 2013 August 13, 2013 by mysansar
हाम्रो एउटा उखान छ- खुट्टा भए जुत्ता कति-कति! जुत्ता त धेरै किसिमको देख्नुभएको होला। यो जुत्ताको उपयोगिताबारे थाहा पाउनु भएपछि चाहिँ तपाईँले पनि भन्नुहुनेछ- आहा, राम्रो रहेछ अति। हेर्दा त त्यस्तो खास केही देखिन्न माथिको जुत्ता। के छ त विशेषता यसमा ?
हेर्दै जानुस् जुत्ताबाट के निस्कियो यो।
हेर्नुस् के बन्दैछ
तपाईँको शरीरलाई आधार बनाएर के बन्दै जान्छ यसबाट हेर्नुस्
लगभग तयार हुन लाग्यो।
अब अलि मिलाउन बाँकी
देख्नुभयो त के बन्यो ? अस्ट्रेलियाली कम्पनीले बनाएको यो जुत्तालाई वाकिङ सेल्टर नाम दिइएको छ। जहाँ जुत्ता त्यतै बास।
खुला आकाशमा सुत्न बाध्य भएकाहरुलाई यस्तो जुत्ता एउटा एउटा दिन पाए कति हुन्थ्यो होला ! अझ ट्रेकिङमा जानेहरुलाई त यसले झनै सजिलो बनाउँछ। हिँड्दै जाँदा जहाँ मन लाग्यो, त्यहीँ बास बसिदियो।
आर्किटेक्चरमा प्रशिक्षण पाएका आठ जनाको समूहले खोलेको सिब्लिङले अरु पनि गजब गजबका कुरा बनाएको छ। कम्पनीको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ।
21 thoughts on “खुट्टा भए जुत्ता कति-कति, यस्तो जुत्ता भइदिए त हुन्थ्यो राम्रो अति”
ह ह मैले त पारासुट होला भन ठानेको धन्न टेन्ट मात्र रहेछ //
अर्केटेकचर हरुको आविस्कार भने रोच्क्नै लाग्यो ,खुल्ला आकास मा हुने हरुको लागि पनि ज्यादै उपयोगी देखिएतपनि दुवै टांग फत्तौन पर्ने हुँदा महिलाहरुको लागि तेती उपयोगी देखिएन | अबिस्कारकले महिलापुरुष बीच भेदभाब गरेर अविस्कार गरेको जस्तो देखियो है !
जुत्ता भित्रको टेन्ट ? रेडियो मै भएको घडी हेर्या जस्तै हो यो त l
मित्र हरु पनि क्या बुझ पचाउनु हुन्छ यार l यो कहाँ बाहिर camping गर्दै हिंड्न बनाको होर? model ले लगाएर यसो ramp मा हिंडेर देखाउन पो त l नपत्याए मोडेलहरुले fashion show मा ramp मा लगाएर हिंडेको पात र प्वाँखबाट बनेको लुगा, १ बित्ताको skirt बाहिर कसैले लगाएर हिंडेको देख्नु भाको छ ? लु भन्नुस त 🙂
राति यो टेन्टमा सुतिराको बेला सु आयो भने के गर्ने होला लौन !
रोचक के छ भने सधै तांग फट्टाएर र बसेरै सुत्नु पर्ने रैछ !!! मलाई खास लागेन !!!
jirel 'G' says:
हो हो खुब रहेछ, यो जुत्ता लगाएर नेपालको हिलो बाटोमा हिड्नु पर्छ अनि बन्छ सेल्टर !
Amit Bhattarai says:
हैन यो त मलाई पनि काम लाग्ने कुरा पर्यो, मूल्य चै कति पर्नी रहेछ ?
लंका मा सुन छ कान मेरो बुच्चै
लौ कस्तो सन्जोग अब त तिनीहरुको website http://siblingnation.net/ त expire भए छ.
पहिले पहिले : ‘आर्काको आश भोकै बास ‘, भन्थे .
अब भने : ‘ दरो खुट्टा को साथ , सुरक्षित बास ‘ भने हुन्छ.
आफ्नो आफ्नो देखाई हो, मलाई पनि धेरै उपयोगी लागेन / सानो र हलुका पोको बनाएर बोक्न मिल्ने बनौन खोज्या हो भने जुत्तैमा नराखे पनि हुञ्छ / तर जुत्तामा रखेपछि हिड्न कतिको सजिलो होला ? अगिनै १ मित्र ले भनेजस्तै फेरी जुत्तामा पोको पार्न त ३ घण्टा लाग्ने भो त हे हे हे हे हे.
यो नेपाल जस्तो गरिब देशमा अलिक सम्बव नहोलाकी?
बाँच्न पर्छ अनेक देखिन्छ ।
Rajendra Basnet says:
हेहे हेहे अब पोको पार त नानि.. ३ घण्टा लाग्ने भो…
हाम्रा देशका बाढी पिडितलाइ दिन पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । कम्तिमा केहि दिन त खुला आकाश मुनि सुत्न पर्दैनथ्यो ।
१० – १५ बर्ष अगाडी “सन्तोष पन्त” को “हिजो आज को कुरा” सिरियलमा भनेको कुरो चाडै पुग्छ कि के हो !
त्यो सिरियलमा …….. एक तिर वाट “राँगा” हाली दियो भने अर्को तिर वाट … “म:म:”, “Leather को jacket “, “हड्डीको बटन” फुत्तु-फुत्तु निस्किने मिसिन (कारखाना) खोल्ने भनेर भनेको सम्झना आयो बा !!!
भैसी हाल्यो भने wrong input आउछ होला 🙂
त्यो “हिजो आजको कुरा” मा हैन, महजोडीको “लक्ष्मी” टेलीसिरियल मा भन्छ | जब हरिबंसले बैंकबाट ऋण लिन्छ, मदनकृष्णले त्यो माग्दा एस्तो मेशिन ल्याउदैछु भन्छ …:-)
Smart phone भने जस्तै यो जुत्ता पनि Smart shoes रैछ
खासै उपयोगी छैन … लगाएर हिड्नलाई गाह्रो हुन्छ!!!
घाम-पानी जोगाएर ओढ्ने “छाता” जस्तै होला यो जुत्ता पनि
“हिड्दा बाहेक अरु बेला लगाउनु मिल्ने जत्ति लगाए पनि केहि नहुने……..Life guarantee”
रमाइलो गर्या मात्र नि ……रिसानी माफ पाउ….जदौ !!!